6.2Inch တစ်လောကလုံးမော်တော်ကား DVD player China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:Universal ဘို့မော်တော်ကား, MP4 Player ကို,အန်းဒရွိုက်ကားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ,6.2Inch က Universal ကား GPS စနစ် Player ကို
Home > ထုတ်ကုန်များ > Universal Android Car Dvd > 6.2Inch တစ်လောကလုံးမော်တော်ကား DVD player
6.2Inch တစ်လောကလုံးမော်တော်ကား DVD player
KD-6205, 6.2Inch တစ်လောကလုံးမော်တော်ကား DVD player
1. ဖြူစင်သောဟာ android 6.0 စနစ်၏အဆိုပါစွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်မြန်ဆန်သည်။ Permium cota-Core CPU ကိုအလင်းရောင်အစာရှောင်ခြင်းတုံ့ပြန်မှု: စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထိပ်တန်း android ခေါင်းကိုယူနစ်, အစာရှောင်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်, effciently အစာရှောင်ခြင်း Boot-up နဲ့ GPS ဝန်အချိန်, ရိုးရှင်းသော multitasking ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမှာ
2.Universal ကားတစ်စီး DVD နယူး HD ကို 1024X600 capacitive touch screen ရှိသည်: သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းတွင်တွေ့ရှိရတူညီသောထိတွေ့မျက်နှာပြင်အစဉ်ထက် ပို. တုံ့ပြန်မှု။
3.Bulit-in ကိုမျှဝေ WIFI ဟော့စပေါ့: သင်တို့အဘို့လွယ်ကူပြီးချောမွေ့စွာအင်တာနက် access ကို browser ကိုအင်တာနက်, အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများ watch, သင်၏မေးလ်စစ်ဆေးအခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူဂိမ်းကို download apps များ, ဒါမှမဟုတ်ပင်အညွှန်းကစား။
4. ဘလူးတုသ်: အ panel ကိုအပေါ်တစ်ဦး built-in မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အတူလာကြပြင်ပ micrphone ထောက်ခံပါတယ်။ ပံ့ပိုးမှုဘလူးတုသ်က MP3 player ကိုအင်္ဂါရပ်, အင်္ဂါရပ်များနှင့်ခေါ်ဆိုသူ၏နာမကိုအမှီ display ကိုမျှဝေဘလူးတုသ်အဆက်အသွယ်။ Apple က Samsung, HTC, Sony ကစတာတွေကနေစမတ်ဖုန်းအပါအဝင်ဘလူးတုသ် 2.0 သို့မဟုတ်အထက်နှင့်အတူ device ကို, ဘလူးတုသ်အသံ output ကိုထောက်ပံ့သောစမတ်ဖုန်းတွေနဲ့သာလိုက်ဖက် MP3 ကိုပြန်ဖွင့်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့။ ပံ့ပိုးမှုအရှိဆုံးဘလူးတုသ် ELM 327 ။
7 လက်မတစ်ခုတည်း din မော်တော်ကား DVD တစ်လောကလုံး Player ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
6.2 လက်မ 1 din တစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
6.2 က Universal သည် "1 ဒင် DVD ကို Player ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အားလုံးအပြည့်အဝထိတစ်လောကလုံး DVD player အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Universal သည် 6.2 လက်မကားကို DVD Player ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မာလ်တီမီဒီယာကားတစ်စီး DVD တစ်လောကလုံးကစားသမား အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Universal ဘို့မော်တော်ကား MP4 Player ကို အန်းဒရွိုက်ကားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 6.2Inch က Universal ကား GPS စနစ် Player ကို Premacy ဘို့မော်တော်ကား DVD Levin ဘို့မော်တော်ကားအသံ Elantra 2016 ဘို့မော်တော်ကားအသံ Mazada5Premacy ဘို့မော်တော်ကား DVD